गौरीलाई : यता बाई-उता हाई :: Press Chautari ::
गौरीलाई : यता बाई-उता हाई
"गौरी मल्ल आईन्,
गौरी मल्ल गईन् ।"
यो कुनै सञ्चारकर्मीले तयार पार्ने समाचारको हेडलाइन होइन । आम नेपाली जनको अभिव्यक्ती हो । टोलमा, बस्तीमा, चोकमा, बजारमा अथवा कुनै चिया/कफिपसलमा जोडिने एउटा प्रसंग हो । मेरो निम्ति त यो एउटा समय सन्दर्भ नै ।
हो, हिजो (चार बर्र्ष अघि) गौरी मल्ल अमेरिका आईन् । अब (मार्च १२, बुधबार) नेपाल फर्कदैछिन् । त्यसो त यी दुवै कुनै सञ्चार कर्मी/संस्थाको लागि समाचार निश्चित् हो । यहि हो सेलीब्रेटी जिन्दगी । आम मान्छेले भन्दा पृथक रुपमा बाँचेको जिन्दगी । अरु त खै के नै पो होला र ? उसको पनि मन छ–दुख्छ नै । आत्मा छ– रुन्छ नै । समग्रमा ऊ पनि त मान्छे नै हो उभित्र अरुका जस्तै सम्वेदना छ । फरक यत्ति– उसको आँशमा, तिनका प्रशंसकहरु साथै रुन्छन्, उसको हाँसोमा उन्मुक्तीको गीत गाउँछन् । यसो भनुँ त्यस्ता व्यक्तित्वहरु जो समाजको अंग भएरै बाँचेका हुन्छन् जसले अत्यन्त थोरै जिन्दगी आफ्नो लागि जिउँछन् ।
नेपाली रजतपटमा गौरी मल्लको उपस्थिती इतिहास बनेर लेखिनेछ । यो निश्चित् हो । इतिहास सधैं सबैको लेखिदैन । लेखिनु पनि हुँदैन । यस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा थोरै मध्येमा बिर्सन नहुने मध्येको अर्काे नाम हो-'गौरी मल्ल' । यहि उनले आर्जेको सबै भन्दा ठुलो र अमुल्य सम्पत्ती पनि । जो इतिहासमा बाँचीरहनेछिन् । जुग्– जुग् । जसले नेपाली चलचित्र यो उचाई सम्म उभ्याउनको निम्ति किला–खाँबा बने । पर्खाल बनेर उभिए । आज त्यसैमाथि उभिएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्र उर्फ “कलिउड” ।
बिदेशी भूमी र लगानीमा बनेको पहिलो चलचित्र “सत्य हरिषचन्द्र” (२००७) र नेपाली भूमी र लगानीमा बनेको पहिलो चलचित्र “आमा” (२०२२) को श्यामश्वेत् पर्दाबाट शूरु भएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आज विश्वस्तरको प्रविधि भित्रीसकेको छ । यसो भनौं चलचित्र क्षेत्र एउटा उद्योगकै रुपमा स्थापित भईसकेको छ । जहाँ हजारौं कलाकार र प्राविधिकहरु बाँचीरहेकाछन् । यसको श्रेय यिनै गौरी मल्लहरुलाई दिनु पर्छ जसले, समाजले दिएको इज्जत र प्रतिष्ठा कायम गरिरहे । सुन्दर र सेलीब्रेटी हुनुको सीमारेखा नाँघेनन् । काँचको पर्दामा देखिने तरुनी बैंश काबुमा राखेर सामाजिक मर्यादाको पर्खाल कहिल्यै तोडेनन् । लोभ र लाल्चामा कहिल्यै पछि लागेनन् । बरु अभावकै जिन्दगी जिएँ । निरन्तर काम प्रति अनुशासित भएर इमान्दारिताको आधा पेट बाँचे । उनीहरुकै सिको गरेर त आज मान्छेका एउटा भीँडले खोज्दैछन् आफ्नो भविष्य । यसैले त गौरी मल्ल इतिहास हुन् ।
चार बर्षपछि गौरी मल्ल स्वोदेश फिर्दैछिन् । त्यो पनि यो अवधीमा आफुले जोडेको झिँटीगुन्टा बोकेर । सायद बितेको बर्षहरुमा यो कोलम्बसले कोतरेको बस्तीबाट केहि गुनासाहरु पनि बोकेर जादैछिन् । आफन्तहरुबीच सन्नाटा छोडेर ऊ चाँहि एक्लै उज्यालोतिर जाँदैछिन् । त्यो उज्यालो जहाँबाट आएको किरणले हामी सबैलाई थप उर्जा दिएको छ । हो, त्यहि उज्यालो त हो जसको प्रकाशमा हामी भविष्यको सूदुर अनि सुगम मार्ग खोज्दैछौं । त्यो उज्यालो माटोको । हो, त्यही माटोमाथि उभिन । त्यहि माटोको सुगन्धमा अत्तरको बास्ना भुलाउन । 'गौरी' देश फिर्दैछिन् ।
हुन सक्छ, मनभरी यो यो पातालभुमीको केहि राम्रा र गुनिला कुराहरु पनि सँगै लादैछिन् । छातीमाथि देश बोकेर यो भूमीमा जर्बजस्तीको जिन्दगी बाँचेकाहरुको देशप्रतिको गहिरो प्रेम मष्तिष्कभरी छाँदेकी होलिन् । मध्येरातमा सुट्केस बन्द गर्दै गर्दा उनैले बाँधेको पोको पन्तुरोमा कुण्ठित प्रवासी हृदयहरु अटेस मटेस भए होलान् । निश्चित् छ, यहाँ पनि उनले केहि सम्झन योग्य पलहरु बाँचेकी थिईन् । सुखद पक्षहरुमा रमाएकी थिईन् । यीनैलाई अघि लाएर यहाँ बाँच्दाको अध्याँरा सम्झनाको प्रतिपक्षमा उभिई रहुन्–गौरी मल्ल ।
त्यो फाटेको मन, मनैले सिउनु न है गौरी...।
चार बर्ष अघि गौरी मल्ल यता आउने दिन ।
चराहरुले बिरह गाए । गुराँसले रंङ् फेरयो । बतास बेस्सरी रिसायो । उनले आपैmसँग बोक्न सकिनन् आफ्ना पदचापहरु । लान सक्नु पथ्र्यो नि बेगमबेली र लालुपातेको पात टिप्दा बसेका औलाका डोबहरु । उनलाई त्यहिको माटो अलौकिक थियो । एउटा धमिलो दिन थियो जुन दिन उनी हातमा पासपोर्ट बोकेर औसत पन्ध्र सय नेपालीको लाइनमा उभिईन् । र उडिन् कोलम्बसले कोतरेको यो पातालभूमि–अमेरिका ।
अब अर्काे बिहान, चराहरुले आशाको गीत गाउनेछन् । गुराँस रातै रंङ्मा फुल्नेछ । बतास उन्मादले उकालो बग्नेछ । उनी फर्कदै गर्दा फेरी टेक्नेछिन् आफ्नै पाइलाहरु । हो त, त्यही बिहान चराहरु बिरह गाउने छैनन् ।
"देशको धुलो माटो टेकेपछि यसो भन्नु है गौरी"–
यो पातालभुमीमा हरेकले आफ्नो छातीमा देश बोकेकाछन् । देश लुटिँदा, देश टुक्रिदा हरेक दुखेकाछन् । बाढी पैरो र आगलागीमा त्यहाँका प्रत्येक मनहरु पनि पिल्सिएकाछन् । छिमेकीले साँध मिच्न खोज्दा हुँकार गर्दै झम्टिन खोज्नेको लस्कर नै छ त्यहाँ । देश भनेको भुगोल मात्रै होइन, देश त मन पो हो भनेर बाँचेकाहरु थुप्रो छन् । देशै सम्झेर हरेक साँझ–बिहान चिसो ठिहीमा ओभिनेहरु त कति–कति ? भुगोल मात्रै त दुरक्षितिजमा छ । बाँकी अरु सप्पै सप्पै जस्ताको तस्तैछन् । स्वादेशको स्तुती गाउनेहरु मात्रै होइनन् साँच्चीकै देश चिनाउनेहरु कैयौं छन् । प्रवासभुमीमा नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति बचाएकैछन् । हो त देश भनेको भुगोल मात्रै होइन । अहँ, हुँदै होइन ।
यत्ति भने पुग्छ ।
देश फिर्नुको आनन्द र खुसी शब्दहरुमा व्यक्त गर्नु असम्भवप्राय छ । यहि अपार खुसी बोकेर देश फिर्देछिन् गौरी । जहाँ उनका लाखौं प्रशंसक पर्खिरहेकाछन् । हुन सक्छ नेपाली रजतपटका कैयौं निमार्ता/निर्देशकहरु उनैलाई कुरेर कथा र क्यामरा बन्द गरेर बसेकाछन् । अब उनको उपस्थितिले कथा र क्यामेरा खुल्नेछन् अनि कसैले बेजोड पूmर्तिले बजाउनेछ– “क्ल्याप” । ...अनि एक्सन् ।
त्यहि एक्सन हुँदै आएको रियक्सनबाट अहिले टाढिएको मन फेरी जोडौला है गौरी ?
अब त गौरीलाई
यता बाई–उता हाई
यसपाली नि यत्ति ।
बुधवार, २०७० फाल्गुन २७ गते ००:५२ / Wednesday, Mar 12, 2014 12:52 am